Vaovao - Fahalalana ny harato vy tariby
Welded wire mesh dia lasakan'ny tariby vy, tariby vy. Ny lavaka harato dia toradroa. Ny fitsaboana amin'ny tany dia azo alefa amin'ny alàlan'ny herinaratra, naroboka mafana ary nopetahana pvc. Ny anti-harafesina tsara indrindra dia ny pvc mifono tariby vita amin'ny tariby. Araka ny endrik'ilay tariby tariby vita amin'ny vy, azo zaraina amin'ny fantsom-pifandraisana vita amin'ny tariby ary ny tontonana vita amin'ny tariby.
Ny harato tariby dia be mpampiasa amin'ny indostria, fambolena, fiompiana, fananganana, fitaterana, fitrandrahana ary lafin-javatra hafa, toy ny vala amin'ny masinina, tranom-biby, fefy voninkazo sy hazo, mpiambina varavarankely, vala famakivakiana, tranom-borona, sobika ary harona ao anaty trano sy birao, harona taratasy ary haingon-trano
Ohatra, ny harato tariby mifono vy vita amin'ny PVC dia ampiasaina amin'ny talantalana fivarotana lehibe, ravaka anatiny sy ivelany, fiompiana akoho amam-borona, voninkazo sy fefy hazo, ivelan'ny trano ampiasaina ho an'ny villa, fitokanana fefy amin'ny faritra onenana, miaraka amin'ny loko marevaka, malala-tanana tsara tarehy, manohitra harafesina, ataovy tsy manjavona, ny tombony azo amin'ny fanoherana ultraviolet, loko tsy voatery: maitso mainty, manga ahitra, mainty, mena, mavo ary loko hafa.
Ny kalitaon'ny harato vy mandeha amin'ny herinaratra dia voafaritra amin'ny alàlan'ny savaivony tariby, ny refy ivelany ary ny fomba mafy orina.
1. Fepetra takiana amin'ny mpiraikitra:
Voalohany indrindra, ny teboka welding dia tokony ho mafy orina, tsy afaka manana fantsom-boasary virtoaly, fisehon'ny famoahana leakage. Ny teboka fanamafisam-peo dia tsy matanjaka elektrika fanamafisam-peo, toy ny jiro vy ankapobeny. roa 3mm elektrika welding harato, ny haavon'ny totalin'ny superposition tariby roa dia 6mm. Rehefa vita ny welding dia tokony ho eo anelanelan'ny 4-5mm ny haavon'ny superposition ny teboka welding tariby indroa, tsy dia mafy orina ny fehin-kibo, tsy dia mafy orina ny faritra famaohana, malemy mora vaky.
2. Fanaraha-maso ny tsy refesin'ny savaivon'ny tariby:
Ny lesoka savaivony mahazatra dia ao anatin'ny ± 0.05mm. Rehefa mividy harato tariby lasopy, aza hadino fotsiny ny vidin'ny vidiny, fa miankina amin'ny lanjan'ny sombin-javatra tsirairay. Ny raikipohy fikajiana lanja dia azo ampiasaina hamaritana raha toa ka ao anatin'ny elanelam-potoana mety ny lesoka amin'ny savaivony tariby.
3. Hadisoana mety amin'ny haben'ny efijery:
Ankehitriny ny famokarana ny harato dia welding milina mandeha ho azy, ny hadisoana dia kely dia kely. Noho ny fifandonana tamin'ny vy nandritra ny welding, dia hisy ny fanitarana hafanana sy ny fihenan'ny hatsiaka, ary ny fiviliana mety dia azo antoka fa misy. Amin'ny ankapobeny, ny lesoka diagonal dia ao anatin'ny plus na minus 5mm, ary ny error dimensional dia ao anatin'ny plus na minus 2mm.